I-Chunghwa yeTaiwan Telecom ikhetha i-Telefall ye-QoE Assurance kunye ne-4K Iimfuneko zeMidiya yokuSebenza-I-NAB Bonisa Iindaba ngu-Broadcast Beat, Umsasazi osemthethweni we-NAB Show-NAB BONISA UVUKA
ikhaya » iindaba » I-Chunghwa yeTaiwan Telecom yaseTaiwan ikhetha i-Telefall yeQoE Isiqinisekiso kunye ne-4K Iimfuneko zeMedia
I-Chunghwa yeTaiwan Telecom yaseTaiwan ikhetha i-Telefall yeQoE Isiqinisekiso kunye ne-4K Iimfuneko zeMedia
Isixeko saseNevada, eCalifornia, ngoSeptemba 23, 2019 - TelestreamInkokeli yehlabathi jikelele kwi-orchestration esekwe kwifayile yeendaba kwimithombo yeendaba, ukusasazwa kweendaba kunye nobuchwephesha bokuhambisa, ivakalise ikhontrakthi yesicwangciso kunye nomnikezeli weenkonzo we-Pay-TV onikezela nge-TV, UChunghwa ngocingo.
Isivumelwano sibona usasazo lwaseTaiwan luphambili kwezentengiso I-Vantage yeTeles iqonga lokulungisa imidiya ye-4K imisebenzi yayo yosasazo. Kwangelo xesha, uChunghwa Telecom uza kuqinisekisa umgangatho wayo wenkonzo (i-QoS) imigangatho yokufezekiswa kwayo kusetyenziswa Telestream's Vidchecker isoftware elawula ukusebenza komgangatho kwi-media esekwe kwifayile.
Utyalomali lukaChunghwa Telecom ku Telestream I-Vantage yintshukumo yecebo losasazo, ivumela ukuba ibe-4K-ilungele kwikamva. Iya kusetyenziswa kuyo yonke i-VOD yosasazo kunye nokuhamba komsebenzi weCatchup.
Ukubonisa TelestreamUfikelelo olwandisiweyo lweemarike, uChunghwa Telecom sele ekhethile Telestream ukubonelela ngayo Umhloli we-IQ Phila kwaye Umhloli we-IQ inkqubo yokujonga ividiyo kunye nohlalutyo. Ngokubalulekileyo, uChunghwa Telecom uxhase inethiwekhi yakhe yokujonga ividiyo Telestream's IVMS Inkqubo yolawulo, elawula kunye nokulungelelanisa uthungelwano lovavanyo lwevidiyo. Le nkqubo iphambili kuxhobisa abaqhubi ukuba bahlengahlengise zonke iialamu ezikwinethiwekhi kulawulo olulodwa, ukunika isikhokelo ngokukhawuleza kwemicimbi kunye nokusonjululwa kweempazamo.
Usebenzisa inkqubo yokujonga ividiyo kunye nenkqubo yohlalutyo, I-Chunghwa Telecom iya kukwazi ukubeka iliso kumgangatho wabathengi bayo (i-QoE), ijonge umgangatho wokujonga kunye nokunyaniseka kwividiyo yayo yonke. Uthotho lwee-alamu ziya kulumkisa abasebenzi ukuba basebenze kuyo nayiphi na imiba ekwisihloko esikhulu, kwaye i-iVMS iya kukhawuleza ikhombe indawo enawo nawuphi na umcimbi ngaphakathi kwenethiwekhi.
“ETaiwan, uChunghwa Telecom uthathwa njengovulindlela ubuchwephesha kunye neyona ndawo iphambili yabasasazi, kungoko sinelunda kukuba ukhethe Telestream njengeqabane layo lobuchwephesha, ”kuphawula uAlistair Butler, oyiNtloko yeNtengiso, kwiHlabathi liphela Telestream. “Inkampani enye ekwaziyo ukujongana nayo yonke i-4K ye-media process, iimfuno ze-QC kunye ne-QoE zazinomdla kwiChunghwa Telecom. Ngumzekeliso olungileyo wexabiso kubathengi kutyalo-mali lwethu lwexesha elide ekukhuleni Telestream"Ukufikelela kunye nobuchule."
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Igalelo UGraham Chapman uVikelelwa kuMhleli SoftAtHome, MStar, iCES2017 TVU Networks I-Ultra HD Forum Injini yeVidiyo ndiphila	2019-09-23
Previous: Amandla e-KDNK-FM Amandla okuSasaza e-Broadcast nge-ENCO DAD Radio automation
next: Iinjineli ze-Dielectric zokuPhononongwa kweMveliso yeTV yeAntiyitha kunye neMiceli mngeni yokuBek 'esweni kuMnyhadala weShishini